‘म पदका निम्ति तमासा गर्ने मान्छे होइन’ – मिलिजुली खबर
काठमाडौं । अन्तरविरोधको गुजुल्टो फुकाउने कसरत गरिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्दैछ । यहीबेला एउटा ‘न्यारेटिभ’ बनिरहेको छ- केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच पुनर्मिलन भयो, तर माधव नेपालचाहिँ फेरि किनारामा धकेलिएका छन् र उनी असन्तुष्ट छन् ।
के नेकपाका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको असन्तुष्टि अझै जीवितै छ ? कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसका आधारका अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाउन लागेका हुन् ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी विहीबार दिउँसो नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्यौं ।
अनलाइनखबरसँगको लामो कुराकानीमा बरिष्ठ नेता नेपाल निकै सन्तुलितरुपमा प्रस्तुत भए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग चार दशक लामो सम्बन्ध रहेको र प्रचण्डसँग पनि तीन दशकभन्दा बढी संगत रहेको बताउँदै नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्दतिको बाटोमा अग्रसर हुन थालेको सकारात्मक टिप्पणी गरे ।
दुई अध्यक्षले लिएको पछिल्लो ‘मूभ’प्रति बरिष्ठ नेता नेपाल सन्तुष्ट छन् कि असन्तुष्ट ? यसको जवाफ उनले ‘ग्रे एरिया’मा बसेर दिन खोजे । उनी अलिकति आशावादीजस्तै देखिए ।
अन्तरवार्ताको रोचक पक्षचाहिँ के रह्यो भने नेता नेपालले आफ्नो भावनात्मक पक्षलाई बढी मुखरित गर्ने प्रयास गरे । म गीत गाएर हिँड्दिनँ, म पदका लागि तमासा देखाउने खालको मान्छे हैन र म चुनौतीको सामना गर्ने मान्छे हुँ भन्दै नेता नेपालले आगामी महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले जे भन्छन्, माधव नेपालले त्यही गर्ने बताए ।
प्रस्तुत छ नेता नेपालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
त्यो उहाँहरुले ल्याउनुभएको हो, सचिवालयको बैठक बसेको छैन । तर, उहाँहरुले सबैको विचार र भावनालाई सुनेर, बुझेरै ल्याउनुभएको होला । आलोचित छ भने खण्डन गर्न सकिन्छ, प्रष्ट पार्न सकिन्छ । कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्न सकिन्छ । क्लिायारिटी छैन भने क्लियारिटी दिन सकिन्छ । त्यसो हुनाले कुनै चीज आयो भने त्यसलाई निषेध नै गर्न खोज्नु हुँदैन ।